Ziyamvuma izinto uBavuma osengukaputeni wamaProteas - Impempe
Ziyamvuma izinto uBavuma osengukaputeni wamaProteas
UTemba Bavuma ukaputeni wamaProteas
Ziyavuma izinto kumdlali weLions namaProteas uTemba Bavuma. Lo mdlali ongukaputeni weLions usanda kuhola iqembu lakhe liwina iCSA T20 Challenge lapho beshaye khona iDolphins ngeSonto kowamanqamu.
Akukapheli nesonto kwenzekile lokho njengoba sebephinde bavuma kwaBavuma. Kulokhu lo mdlali uqokelwe isikhundla esiphezulu kakhulu sokuba ngukaputeni weqembu lesizwe laseNingizimu Afrika lekhilikithi elidlala imidlalo yosuku olulodwa neyeT20.
Lokhu kuchaza ukuthi uBavuma uyena ozobe engukaputeni wamaProteas uma esedlala imidlalo yeNdebe yoMhlaba yeT20 ngo-2021 nango-2022. Uzophinde ahole amaProteas kwi-ICC World Cup e-India ngo-2023.
Ushintsho kumaProteas alugcinanga kuBavuma njengoba nasemidlalweni yamaTest kube yinto efanayo ngoLwesine. Kumenyezelwe ukuthi uDean Elgar uyena ozoba ngukaputeni wamaProteas emidlalweni yamaTest. Lokhu kusho ukuthi u-Elgar uzobe ehola amaProteas kwi-ICC Test Champioship elandelayo.
U-Elgar uthathe izintambo kuQuinton de Kock obengukaputeni wamaProteas obambile ngesikhathi ethola isibhaxu esibangisa amahloni ePakistan ngenyanga edlule. Naye uDe Kock ubesanda kubanjiswa lesi sikhundla ngemuva kokushiya kukaFaf du Plessis osanda kumemezela ukuthi ngeke esayidlala imidlalo yamaTest. UDe Kock uyena obebambile nasemidlalweni yosuku olulodwa neyeT20. UDu Plessis uveze ukuthi usezogxila emidlalweni yosuku olulodwa neyeT20 njengoba esethe khumu kweyamaTest.
Esitatimendeni esikhishwe yiCricket South Africa ikuqinisekisile ukuthi izinto sezizohamba ngolunye unyawo kumaProteas kusukela ngoLwesine.
Umqondisi weCSA uGraeme Smith uthe: “Siyabonga kakhulu kuQuinton ngomsebenzi awenzile emidlalweni yosuku olulodwa nokusukumela kwakhe phezulu ngesikhathi abaqoki besabheka ukaputeni wamaProteas kumaTest. Silindele ukuthi aphinde adlale indima ebonakalayo ekuholweni kweqembu.
“NjengeCSA sijabule ngokuqokwa kukaTemba noDean futhi sethemba ukuthi sinamadoda azohola amaProteas abuyise ukuwina kwawo kwakudala. Bobabili bazofika nozinzo uma kukhulunywa ngokuholwa kweqembu nefomu.”
UBavuma kuvele ukuthi uyena uzoba yiphini lika-Elgar emidlalweni yamaTest.
Previous Previous post: Sikulungele ukubhekana ne-India: ukaputeni wamaProteas
Next Next post: Akube nokuzwana nokusizana emaqenjini aKwaZulu-Natal ukuze likhule ibhola kulesi sifundazwe